Mpamokatra Worm Gear | Teknolojia avo lenta sy avo lenta - Hery mandrakizay
Home / Fitaovana / Worm Gear
Ampiasaina ny kitapo kankana rehefa ilaina ny fihenan'ny hafainganam-pandeha. Ny tahan'ny fihenam-bidy dia voafaritra amin'ny isan'ny fanombohan'ny kankana sy ny isan'ny nify amin'ny kitapo kankana. Fa ny kankana kankana dia manana fifandraisana tsy mitongilana izay mangina nefa miteraka hafanana ary somary ambany ny fahaizan'ny fampitana.
Paingotra kankana maro no manana fananana mahaliana izay tsy ananan'ireo fitaovana napetraka hafa: afaka mamily mora foana ny kankana ny kankana, saingy tsy afaka mamily ny kankana ilay kodiarana. Izany dia satria ny zoro eo amin'ny kankana dia marivo loatra ka rehefa manandrana mamily azy ny fitaovana dia mijanona eo amin'ny toerany ny fifanenjanana eo anelanelan'ny fitaovana sy ny kankana.
Ilaina ity endri-javatra ity ho an'ny milina toy ny rafitra mpampita, izay ahafahan'ny fiasa mihidy ho toy ny frein ho an'ny mpampita rehefa tsy miodina ny motera. Fampiasana iray hafa mahaliana indrindra an'ny kankana kankana no ampiasaina amin'ny fiara sy kamio avo lenta.
Raha ny momba ny famokarana, amin'ny ankapobeny, ny kankana dia vita amin'ny vy mahery ary ny kankana kankana kosa vita amin'ny vy somary malefaka toy ny varahina alimo. Izany dia satria ny isan'ny nify amin'ny kankana kankana dia somary avo raha oharina amin'ny kankana miaraka amin'ny isan'ny fanombohany dia matetika 1 ka hatramin'ny 4, amin'ny fampihenana ny hamafin'ny kankana, mihena ny fikororohana amin'ny nify kankana. Ny toetra iray hafa amin'ny famokarana kankana dia ny filàna milina manokana ho an'ny fanapahana fitaovana sy ny fikikisana ny kankana. Ny fitaovana kankana, etsy ankilany, dia azo atao amin'ny masinina manafosafo ampiasaina amin'ny paosotra famporisihana. Saingy noho ny endrika hafa amin'ny nify dia tsy azo atao ny manapaka girara maromaro indray mandeha amin'ny alàlan'ny fametahana ny banga volo toy ny azo atao amin'ny paosotra.
Ny rindranasa ho an'ny kankana kankana dia misy boaty fanamoriana, roulant fanjonoana, fantsom-panaingoana tadin-gitara, ary ilaina ny fanitsiana haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny fampihenana haingam-pandeha lehibe. Na dia azonao atao aza ny manodina ny kankana kankana amin'ny kankana dia matetika tsy azo atao ny manodina ny kankana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny kankana kankana. Io no antsoina hoe ny fanidiana tena. Ny endri-javatra fanidiana tena dia tsy azo antoka foana ary fomba iray hafa no atolotra ho fisorohana marina.
Misy ihany koa ny karazana fitaovana kankana duplex. Rehefa mampiasa ireo dia azo atao ny manitsy ny lamosina, toy ny ilan'ny nify fa mila fanitsiana lamosina, tsy mila fanovana ny elanelana afovoany. Tsy dia betsaka loatra ny mpanamboatra afaka mamokatra an'ity karazana kankana ity.
Antsoina hoe kodiarana kankana matetika ny fitaovana kankana.
Mampiseho ny valin'ny 1-32 amin'ny 58
fitaovana kankana bitika
kodiarana kankana varahina
lambam-pandriana kankana kely
kankana fanombohana tokana
multi manomboka fitaovana kankana
kankana mandrakotra indroa
fitaovana kankana misy kofehy indroa
paositra kankana manomboka roa
singa fitoviana kankana
mpanamboatra kodiarana kankana
fitaovana kankana fanao
lamba kankana manarona
tokana kankana manomboka
vy kankana vy
mandrakotra fitaovana kankana
fitaovana kankana manual
kankana namono fiara
kodiarana kankana sy hazo kankana
kankana sy fitaovam-piadiana pinion
fitaovana kankana marina
fitaovana kankana diy
fitaovana kankana globoid
nema 23 fitaovana kankana
nema 17 fitaovana kankana